Qalabka Bacriminta, Khadadka Soo-saarista Bacriminta - YiZheng
Waxaan bixinaa wadarta xalalka geedi socodka
Khadadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah Khadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah
Zhengzhou Yizheng Qalabka Mashiinnada Culus Co., Ltd. ku yaal galbeedka warshadaha ee Zhengzhou, gobolka Henan, ku takhasusay cilmi-baarista iyo horumarinta ee technology ilaalinta deegaanka beeraha, cilmi-baarista iyo horumarinta iyo soo-saarka ee qalabka dib u warshadaynta qashinka, bacriminta BB noocyo dhamaystiran oo qalab, qalabka bacriminta organic, line-soo-saarka bacriminta organic. cilmi baarista qalabka iyo horumarinta iyo wax soo saarka. Waxaan leenahay awood cilmi baaris iyo horumarineed iyo xoog wax soo saar. Si loo siiyo macaamiisha qaabeynta habka, soosaarida qalabka bacriminta dabiiciga ah, rakibaadda, tijaabinta, taageerida adeeg dhameystiran oo hal-joogsi ah.
Bixi geedka geedka bacriminta oo dhan
U Adeegso Bacriminta Kiimikada
Bacriminta kiimikada waxaa si dabiici ah looga soo saaraa walxaha aan dabiici ahayn, waa walax siisa cunno nafaqo u leh koritaanka dhirta iyadoo la adeegsanayo hababka jirka ama kiimikada Nafaqooyinka Bacriminta Kiimikada Bacriminta kiimikada waxay hodan ku tahay saddexda nafaqo ee lagama maarmaanka u ah pl ...
Xakamaynta Tayada Bacriminta Dabiiciga ah
Xakamaynta xaaladda wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah, ficil ahaan, waa isdhexgalka guryaha jireed iyo kuwa nafleyda ah ee habka sameynta compost. Dhinac marka laga eego, xaaladda xakamaynta ayaa ah is dhexgal iyo isuduwid. Dhinaca kale, dabaylo kala duwan ayaa laysku qasan yahay, maxaa yeelay ...
Dib u warshadeynta qashinka haraaga likaha
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo la horumarinayo tikniyoolajiyadda wax lagu beero ee fangaska la cuni karo, sii ballaarinta isdaba-joogga ah ee aagga la beero iyo tirada sii kordheysa ee noocyada wax lagu beero, boqoshaadu waxay noqotay dalag lacageed oo muhiim u ah wax soo saarka beeraha. Meesha ay ka baxdo likaha, qashin badan ayaa ah hidde ...
Sida loo xusho Mashiinka Qalajinta Bacriminta
Kahor intaadan dooran mashiinka lagu qalajiyo bacriminta, waxaad u baahan tahay inaad sameyso falanqeyn hordhac ah oo ku saabsan baahiyahaaga qalajinta: Waxyaabaha ay ka kooban tahay qaybaha: Maxay yihiin sifooyinka jirka marka ay qoyan yihiin ama qalalan yihiin? Waa maxay qaybinta kaladuwanaanshaha? Sumeysan, ololaya, wax daxaya ama xoqaaya? Nidaamka loo baahan yahay ...
Marka bacriminta dabiiciga ah ee guriga lagu sameeyo, isku-darka qashinka dabiiciga ah waa lagama maarmaan. Isku-darka ayaa ah hab wax ku ool ah oo dhaqaale oo loogu takhaluso qashinka xoolaha Waxaa jira saddex nooc oo noocyo taallo ah: mid toosan, god-god, iyo god Toos ah Nooca ku habboon heerkulka sare, roobka, qoyaanka badan, biyaha sarreeya ...